Soo saaraha iyo Warshada ugu Fiican FKM (Peroxide Copolymer Curable)Huaxia Shenzhou
PVDF(DS202D) xabagta loogu talagalay Lith...
Shayga 26L Habka/Heerka Imtixaanka
Viscosity Mooney,ML(1+10)121℃ 20-25 GB/T1232-1
Xoog-jilicsanaanta,MPa≥ 15 GB/T528
Kordhinta wakhtiga Nasashada,％≥ 180 GB/T528
Sifada iyo codsiga Iska caabinta uumiga biyaha /
Si ballaaran loo isticmaalo dhaqida wax soo saarka, gaaska, O-rings, V-rings, shaabadihii saliidda, diaphragms, tuubooyinka caaga ah, galalka cable, marada dahaarka kulaylka, taarikada waalka, kala goysyada ballaarinta, duub caag ah, dahaarka iyo pasty heerkulka vulcanization putties mararka iska caabin ah. heerkulka sare, shidaalka (basiin duulista, shidaalka auto), saliid saliid (saliida synthetic), dareere (kala duwan non-polar dareere), daxal (acid, alkali), oksidad (oleum), ozone, shucaaca iyo cimilada.
1.Fluoroelastomer copolymer waxa uu leeyahay xasilooni kulayl wanaagsan oo ka yar 200 ℃.Waxay dhalin doontaa raad burburka haddii lagu dhejiyo 200 ℃ 300 ℃ muddo dheer, iyo xawaaraha ay qudhmi kor 320 ℃, alaabta qudhmi waa inta badan hydrogen fuoride sun ah iyo fluorocarbon Marka caag cayriin ah oo ka samaysan folooraska uu la kulmo dabka, waxa ay sii dayn doontaa sunta hydrogen fluoride iyo xayndaabka dabiiciga ah ee fluorocarbon.
2.Rber fluorous aan lagu qasi karin budada birta ah sida budada aluminium iyo budada magnesium, ama in ka badan 10% amine, haddii ay taasi dhacdo, heerkulku wuu kici doonaa oo dhowr curiye ayaa ka falcelinaya FKM, taas oo waxyeelo u geysan doonta qalabka iyo hawlwadeenada.
1. Caag Fluorous ah ayaa lagu soo shubaa bacaha PE, ka dibna waxaa lagu shubaa kartoon, miisaanka saafiga ah ee kartoon kasta waa 20kg.
2. Caag-caag leh waxa lagu kaydiyaa bakhaar nadiif ah, qalalan iyo qabow, waxaana lagu raraa si waafaqsan kiimikooyinka aan khatarta ahayn, waana in laga fogaadaa isha wasakhaysan, qorraxda iyo biyaha inta lagu jiro gaadiidka.
Hore: FKM (Perpolymer lagu daweyn karo
Xiga: FKM waxay ku jirtaa Fluorine Sare (70%)